Raiso ity fonosana vector maimaim-poana ity amin'ny Noely | Famoronana an-tserasera
Sintomy ity fonosana haingon-tsarimihetsika manana lohahevitra Krismasy maimaimpoana maimaimpoana nataon'i Freepik
Androany isika dia tonga feno fanomezana miandry ny Navidad misaotra Freepik Izany amin'ny manolotra maimaimpoana ity kitapom-batana misy lohahevitra Krismasy ity maimaimpoana ho an'ny mpamaky Creativos Online.
Azonao ampiasaina izy roa ho an'ny singa mitokana, firaketana, kisary na mandefa karatra paositra an-tserasera na zavatra tonga ao an-tsaina. Azo antoka fa lasa adala kely ianao mahita zavatra mendrika hotononina ary miavaka amin'ny mahazatra izay hitantsika matetika amin'ny Internet. Ny tolotra Freepik anay dia fitsaboana tena tsara ary azonao ampiasaina hampiasa ireo foronina mety indrindra.
Malalaka tanteraka izy ireo mba hahafahanao manana ireo singa Krismasy manaitra indrindra toa ny labozia, boaty fanomezana, lakolosy, baolina hazo krismasy, kintana, snowman, Dadabe Noely, baoty hitahiry ireo fanomezana tsara indrindra na koa satroka Krismasy. Tsy inona izany fa ny ohatra sasany, satria tsy ho hitanao maimaimpoana fonosana vector toa ity ity amin'ny Internet.
Izy ireo namboarina tamim-pahamendrehana ary niavaka noho ny lokony sy ny fahitany ny fomba nentim-paharazana raha maoderina izy ireo. Ireo mpandray anjara toa ny elf maintso, ilay snowman na i Santa Claus tenany dia tena mampihomehy ary hanintona ilay olona ao amin'ny fianakaviana izay mahazo carte postaly na miaraka amin'ireo singa haingon-trano samihafa izay ampiasaintsika matetika amin'ity Krismasy ity. Mbola amin'ny 21 Novambra isika, noho izany dia betsaka ny fotoana hampiasanao azy ireo.
Sintomy ny loharano amin'ny alàlan'ny fanindriana eto
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Sintomy ity fonosana haingon-tsarimihetsika manana lohahevitra Krismasy maimaimpoana maimaimpoana nataon'i Freepik
Niezaka ny nisintona ny fonosin'ny Noely aho ary tsy nisy na inona na inona nivoaka